Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Ciidanka Qaranku Dalalka Jaarka Kaga Gudban Yihiin Caddowga - #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Ciidanka Qaranku Dalalka Jaarka Kaga Gudban Yihiin Caddowga
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka qaybgalay munaasibada 28aad ee xuska aas-aaska ciidanka qaranka Somaliland oo lagu qabtay xarunta taliska guud ee Hargeysa.
Munaasibadda xuska waxa Madaxweynaha kala qaybgalay guddoomiyaha gollaha wakiillada, Cabdirisaaq Khaliif Axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare, Aadan Xaaji Cali Axmed, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, xubno kamid ah gollaha wasiirrada, xildhibaanno, xubno katirsan asxaabta qaranka
Sidoo kale, waxa munaasibada ka qaybgalay Saraakiil ka socda dalka Djibouti oo uu hoggaaminayay Taliye ku xigeenka ciidanka millateriga dalka Djibouti General Daahir Cali Maxamed oo ay wehelinayaan taliyayaasha ciidamada Booliska, Kornayl Cabdullaahi Cabdi Faarax, madaxtooyada, Kornayl Maxamed Jaamac Ducaale, ilaalada xeebaha iyo taliyaha ciidanka cirka, Kornayl Wacays Cumar Boqore,
Munaasibada xuska 28aad ee Aasaaska ciidanka qaranka Somaliland, waxa kale oo ka qaybgaaly wefti ka socda dalka Ethiopia oo uu hoggaaminayo, hoggaanka guud ee nabadgelyada ciidanka Ethiopia General. Burhan Bekel oo ay wehelinayaan taliyaha Leyuu Booliska dawlad-deegaanka Soomaalida, General Maxamed Xaaji iyo saraakiil kale.
Waxa kale oo ka qaybgalay Safiirro ka socda dalalka Djibouti, Taiwan, Ethiopia iyo Turkiga, hoggaannada kala duwan ee ciidankaa Millateriga iyo marti-sharaf kale.
Xuska munaasibada waxa lagu soo bandhigay guulihii kala duwanaa ee ay ciidanka Millaterigu dalka soo gaadhsiiyeen iyo kaalinta ay ku leeyihiin nabadda, sugidda xuduuddaha iyo horumarka qaranka Somaliland.
Kooxda fannaaniinta ciidanka qaranka, ayaa madasha kusoo bandhigay masraxiyad ka turjumaysa kaalinta ay ciidanka qaranku kaga jiraan horumarka dalka, adkaynta amniga, xallinta khilaafaadka iyo hirgelinta dawladnimada, taas oo si weyn usoo jiidatay madaxdii goobta ku sugnayd.
Taliyaha ciidanka Booliska dalka Djibouti, Kornayn Cabdullaahi Cabdi oo ku hadlay magaca weftiga ka socda dalka Djibout ayaa ammaanay ciidanka militeriga Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku sifeeyey ciidan sharafi ka muuqato, isaga oo ku hambalyeeyey munaasibadda xuska sannad-guuradooda.
Genenal Maxamed Xaaji oo ka socda dawladda deegaanka Soomaalida oo ku hadlayey magaca weftiga Ethiopia, ayaa Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidankeeda ku bogaadiyay horumarka dhinacyada kala duwan leh ee ay ku tallaabsatay, isaga oo sidoo kale ku bogaadiyey wada-shaqaynta wanaagsan ee kala dhaxaysa ciidamada dalalka deriska.
Taliyaha ciidanka millateriga Jamhuuriyadda Somaliland, Sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Taani, ayaa ka warramay horumarka uu ciidanka qaranku u tallaabsaday, duruufaha kala duwan ee kusoo shaqeeyey, heerka uu maanta taagan yahay iyo sida uu astaanta ugu yahay haybadda iyo horumarka qaranka, waxana uu caddeeyey inay Jamhuuriyadda Somaliland, haysato cudud ciidan oo ku filan, tabobar casri ah qaba, waajibaadkii saarnaana gudanaya.
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhiga, Cabdiqani Maxamuud Caateey (Fariid), ayaa isaguna dhankiisa bogaadiyey ciidanka militeriga Jamhuuriyadda Somaliland ee maanta 28-jirsaday, waxana uu ku dheeraaday mashaariicda kala duwan ee dhinaca ciidanka horumarintiisa la xidhiidha, kuwaas oo laga maalgeliyey miisaaniyadda qaranka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, Muuse Biixi Cabdi, ayaa ciidamada militeriga dalka, hoggaammadooda, iyo xaasaskoodaba u diray hambalyo iyo bogaadin, waxana uu ku sifeeyey naftood hurayaal ku xardhan taariikhda ma guurtada ah ee qarankani leeyahay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu kormeeray markii munaasibadu dhammaatay cusbitaal casri ah oo ciidanka qaranka looga bineeyey gudaha xarunta Birjeex, waxana uu xadhigga ka jaray dhismeyaal cusub oo ciidanka loo dhisay.